Soo iibso Spotify Plays - TurboMedia.io
Faa'iidooyin noocee ah ayaan arki doonaa haddii aan iibsado Ciyaaraha loo yaqaan 'Spotify Plays'?
Waxay kordhisaa kalsoonidaada wadooyinkaaga
Waxay ka caawisaa kordhinta darajooyinka heesaha
Uma baahnid inaad dhageysatid wadooyin kale
Waxay ku dhiirigelisaa dadka inay jeclaadaan, Ciyaaraan & Faallo ka bixiyaan raadadkaaga
Natiijooyinka waxay ku bilaabmaan saacadaha 24
Maxay tahay inaan u iibsado bandhigyada ciyaaraha?
Ciyaaruhu waxay ku xisaabtamayaan astaantaada guud waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee booqdayaasha soo booqda astaantaada ay fiiriyaan. Waxay u horseedi kartaa iyaga inay go'aansadaan isla markaa halkaasna dhagaysan karaan raadadkaaga. Markaad ka iibsato cayaaraha 'Spotify Plays' shirkad sumcad leh sidayada oo kale waxay siinaysaa Spotify-ka tartanka tartankiisa waxay u baahan tahay inay dad badani raadiyaan raadadkaaga, isla markaana kaa caawiyaan dhisidda fankaaga.